ဟန်းဂုရွာ: တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကို ထမ်းဆောင်ခြင်းမှ ထိုက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေးသို့
တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကို ထမ်းဆောင်ခြင်းမှ ထိုက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေးသို့
အီးမေးလ်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးတောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အကြောင်းပါ စာပါ။
အင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာတက်ရောက်ကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂၀၀လောက်ကြားမှာ ကျနော်အပါအ၀င် မြန်မာ၂ယောက်တောင် တက်ခဲ့ပါတယ်။
ကဲ ဒီတကြိမ် ဆန္ဒပြပွဲမှာကော?
အခွင့်အရေးဟာ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားကို ထမ်းဆောင်ရာမှ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်သလို
တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားပျက်ကွက်သူအနေနဲ့ အခွင့်အရေးဟာ မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
2. 8월 17일이 되면 고용허가제가 시행된 지 9년이 됩니다.
၈လ ၁၇ရက်နေ့ဆိုရင် အီးပီအက်စ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တာ ၉နှစ်ပြည့်ပါပြီ။
그러나 고용허가제는 이주노동자들의 노동권과 체류권을 심각하게 침해하고 있습니다.
ဒါပေမယ့် အီးပီအက်စ်စနစ်ဟာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနှင့် ကိုရီးယားတွင်း နေထိုင်ရေးအခွင့်အရေးအပေါ် ဆိုးဝါးစွာ ချိုးဖောက်လျှက်ရှိနေပါတယ်။
사업장 이동 제한, 사업장 내 차별과 폭력, 사업주만 재고용 권한을 갖고 있는 점, 농축산어업에서 최악의 동조건 등 이주노동자를 옭죄는 제도입니다.
လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကန့်သတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့် ထိုးကြိတ်စော်ကားခြင်း၊ အလုပ်ရှင်ထံတွင်သာ ပြန်လည်အလုပ်ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေလုပ်ငန်းတို့တွင် အဆိုးဆုံးသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အီးပီးအက်စ်စနစ်ဟာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား လည်ညစ်သတ်၍နေသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
노예허가제라고 해도 과언이 아닐 고용허가제는 폐지되어야 하고 노동3권이 보장되어 이주노동자들이 권리를 보장받으며 일할 수 있어야 합니다.
ကျွန်စနစ်လို့ခေါ်လည်း အလွန်မရှိတဲ့ အီးပီအက်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၃ရပ်ကို အာမခံပေးကာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် အခွင့်အရေးများကို ရရှိပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
이에 이주공동행동과 제 단체들은 아래와 같이 집회를 개최하고자 합니다.
ဒါကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့အစည်းများဟာ အောက်ပါအတိုင်း ဆန္ဒပြပွဲကို ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
<고용허가제 폐지! 노동3권 쟁취! 2013 이주노동자 투쟁의 날 집회>
အီးပီအက်စ် စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး! အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၃ရပ် ရရှိရေး! ၂၀၁၃ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲ
- 일시: 2013년 8월 18일(일) 오후 3시
-နေ့ရက် ။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ၈လ ၁၈ရက် (တနင်္ဂနွေ) နေ့လယ် ၃နာရီ
- 장소: 보신각 앞 (집회 후 시청광장까지 행진)
-နေရာ ။ ဘိုရှင်ဂါ့ရှေ့(ဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင် ဆိုးလ်မြို့တော်ခန်းမအထိ ချီတက်မည်)
- 주최: 경기이주공대위, 민주노총, 외국인이주·노동운동협의회, 이주공동행동, 인천이주운동연대
- ကျင်းပသည့်အဖွဲ့ ။ ဂယောင်ဂီရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၊
-고용허가제 폐지하고 노동허가제 실시하라.!
-사업장 이동의 자유 보장하라!
-단속 추방 중단하고 미등록 이주노동자 합법화하라!
-이주노조 인정하고 합법화하라!
-고용센터는 사업주가 아니라 이주노동자의 목소리를 들어라!
-이주노동자에게 영주권 신청 허용하라!
-이주노동자에게 가족을 동반할 권리를 달라!
- အီးပီအက်စနစ်ဖျက်သိမ်းပြီး WORK PERMITစနစ်ကျင့်သုံးရေး
- လွတ်လပ်စွာ လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရှိရေး
-အတင်းအကြပ်ဖမ်းဆီးပြန်ပို့ခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး အထောက်အထားမဲ့အလုပ်သမားများအား တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး
-ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေး
-အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဟာ အလုပ်ရှင်ရဲ့ အသံထက် အလုပ်သမားရဲ့ အသံကို နားထောင်ပေးရေး
-ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေနဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူနေထိုင်ဖို့ ခေါ်ခွင့်ပေးရေး
ဆန္ဒပြပွဲတွင် အခမဲ့ ဆေးကုသပေးခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လက်တွေ့ လေ့လာခြင်း၊ရေခဲရေဝေမျှခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်သွားပါမည်။
SHIN HAN BANK 110-275-574652
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ရရှိရေးအတွက် ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု
ဖုန်း 02-2670-9156 Mail : migrantsact@naver.com ကာဖေး http://cafe.naver.com/act4migrants
Posted by စိုးမိုးသူ at 12:20 AM